Orinasa sy mpamatsy PANOMPOOM-PANOMPOANA Sina China ALUMINIUM | Alucosun
PANELOM-PANORANA ALUMINIMA (Ho an'ny rindrin'ny rindrina)
Miaraka amin'ny fanatsarana ny teknolojia ifotony, ny Alucosun FR dia novolavolaina ho an'ny fepetra henjana amin'ny fitsipiky ny faharetana amin'ny vokatra maritrano. Alucosun FR dia nangatahin'ireo mpanao mari-trano sy tompon-trano manerantany fa tsy ny fananany miavaka toa ny atness faran'izay mafy, ny fahamendrehana avo lenta nefa ny fahaizany mamorona endrika tena tsara, fa ny tena zava-dehibe indrindra, ny zava-bitany mahatalanjona amin'ny porofo mivaingana amin'ny tombony azo avy amin'ny mineraly namboarina. fototry.
Ny loko varitey miaraka amina sary miavaka amin'ny loko mahazatra sy mahazatra, miaraka amin'ny matt sy gloss ambony. fitaratra sy borosy nished ihany koa Alucosun no mpamokatra voalohany manome tolotra midadasika (2000mm) manohana ny fanontana endrika malalaka.
MORA PEEL FILM
Sarimihetsika tsy manam-paharoa Peel Protective izay azo esorina mora foana isaky ny mampiasa ianao. Ny tontonana tontonana dia tsy hitazona fehezam-baravarankely aorian'ny fijanonan'ny dingana fanesorana. Ny viscosity-n'ilay horonan-tsary dia tsy mivaona amin'ny fotoana farany ka miteraka fitomboan'ny fiainana talantalana Alucosun Sign ®.
SISTEMA QA azo antoka
Ny rafitra QA miorina tsara sy voarindra dia miantoka ny kalitaon'ny vokatra atolotray. Tratra tamin'ny fampifangaroana tanteraka ny Laboratoara feno sy mpiasa mahay. Ny andiam-pamokarana rehetra dia voasedra amin'ny elanelam-potoana matetika, ary ny tatitra dia voatahiry ao anaty fitandremana azo antoka ho an'ny fanarahana ny ho avy.
Fotoana fohy kokoa noho ny fotoana fohy kokoa
Izahay dia miasa manodidina ny famantaranandro miaraka amin'ny tahiry ampy amin'ny akora Raw ho an'ny famaritana isan-karazany hanompoana ny mpanjifantsika manerana an'izao tontolo izao. Ho fanampin'izany, eo amin'ny lafiny stratejika isika eo akaikin'ny loharanom-pahalalana ahafahantsika manao vokatra namboarina ihany koa, mahatonga ny fotoana itarihantsika ho fohy noho ireo mpamokatra maro hafa.
Nandray anjara lehibe tamin'ny indostrian'ny Signage izahay tamin'ny famolavolana vokatra vaovao. Ny fizarazaranay R&D dia niara-niasa tamin'ny orinasa mpamokatra PPG eo an-toerana mba hamolavolana loko PE manokana izay afaka mifanaraka amin'ny karazana milina fanontana nomerika. Mandritra izany fotoana izany, miasa mafy izahay amin'ny famolavolana vokatra vaovao izay maivana kokoa sy hafana ho an'ny mpanjifanay.
Famantarana Alucosun®Ny tontonana vita amin'ny aliminioma dia misy ravina aluminium roa sy fotony polyethylene izay voahosotra amin'ny fizotrany mitohy miaraka amin'ny mari-pana ambony.
Item Range Size habe
Hatevin'ny tontonana (mm) 2-8mm 2mm, 3mm, 4mm, 6mm
Hatevin'ny hoditra aluminium (mm) 0.1-0.5mm 0.12mm, 0.15mm, 0.21mm, 0.3mm
sakany 1000-2000mm 1220mm, 1250mm, 1500mm, 2000mm
Length ≥1000mm 2440mm, 3050mm, 3660mm, 4050mm
Hateviny (MG) -0 + 0,2
Sakany (MG) ± 2
Length (MG) ± 3
Diagonal (MG) ± 5
Bow Maximum (mm) ≤5
Squcious Maximum (mm) ≤5
Hatevina loko (micron) 18-20μm
Hamafin'ny pensilihazo 2H
Fahasarotan'ny palitao 2T
Fanoherana ny maripana -40 ℃ ~ + 80 ℃
Herin'ny fiantraikany (Kg / cm2) 50kg / cm2
Fanoherana ny rano mangotraka 2 ora, tsy misy fiovana
Fanoherana asidra 5% HCL, 24 ora tsy misy fiovana
Fanoherana Alkali 5% NaOH, 24 ora tsy misy fiovana
Fanoherana menaka Menaka maotera 20 #, tsy misy fiovana
Fanoherana fanoherana In-200 nataon'i MEK
Fanoherana fanoherana ＞ in-1000 tsy misy fiovana
Tanjaka Peel 180 ° ＞ 5 Newton / mm
Karazana firaka AA3003 / AA1100
Rafitra / Fomba / spec Polyester / Coil Coating / AAMA
Gloss @ 60 ° 70% -100%
Famoahana famindrana feo (dB) 23-25
R Sarobidy (MK / W) 0.0045 0.0078 0.0110
U Value (W / MK) 5.7 5.6 5.5
Fanitarana hafanana Liner 2,4 mm / m @ isaky ny 100 ° C
Famantarana Alucosun ®tontonana dia ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany sendra ny olona amin'ny fiainana isan'andro. Izy io dia vokatra mahasoa sy be mpampiasa amin'ny indostria fanaovana sonia sy dokambarotra ho an'ny zavaboary mahatalanjona.
MANAO SIGN MANANA FIVORIANA SHOP
Noho ny fahamendrehana sy ny endrika tsy manam-paharoa an'ny Alucosun Sign ®PE, dia mifanaraka tsara amin'ny famokarana mari-pamantarana, fampirantiana, fijoroana fampirantiana, sns.
Famantarana Alucosun® Ny pe, antoka azo antoka amin'ny PEG, misy loko isan-karazany sy safidy manjelanjelatra, manome ny vahaolana mety indrindra ho an'ny haingon-trano anatiny.
Fanontam-pirinty LED / UV DIGITAL
Famantarana Alucosun ®manolotra fanontana nomerika UV sy fanontana LED. Afaka mifanaraka amin'ny karazana milina fanontana izy rehetra, ny tontonana tontonana koa dia afaka manao pirinty nomerika LED. Azo antoka fa afaka mitsitsy angovo 50% ny haitao fanontana LED. Ny vidin'ny jiro LED dia azo ampiasaina mandritra ny 4000 ora, ary koa namana, tontolo iainana, fandidiana mora kokoa. Tokony ho fironana amin'ny indostrian'ny fanontana izany.
Famantarana Alucosun rehetra® Ny famaranana dia tonga mandritra ny 5 taona fiantohana amin'ny fampiasana ivelany. Ny famaranana borosy sy ny fitaratra miaraka amin'ny fomba hafa dia tsy azo antoka ho an'ny fampiharana ivelany ho an'ny fiantohana loko marina dia mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany.
Hatrany am-piandohana, Alucosun Sign ®dia nibanjina foana ny masony tamin'ny fomba rehetra, nanomboka tamin'ny fananganana ny akora hatramin'ny vokatra farany, izay tanteraky ny rafitra fanaraha-maso kalitao - feno inspektera matihanina sy fitaovana laboratoara avo lenta, manome toky ny vokatra rehetra mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena.
Famantarana Alucosun ®ekipa dia manolo-tena hanohana ny mpanjifanay amin'ny alàlan'ny fanomezana ny fotoana fandefasana ireo vokatra tsara azo antoka sy serivisy manana lanja miavaka. Ireo antony rehetra ireo dia afaka manampy amin'ny fahazoana tombony amin'ny fifaninanana eo amin'ny tsenanao. Izahay dia mikendry ny hitazona ny vina sy ny iraka aminay amin'ny fikatsahana hatrany ny fanatsarana sy ny fampandrosoana amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy fianarana tsy tapaka.
Manasa anao izahay hametraka ny vokatray hizaha toetra, hahazo bebe kokoa noho ny noeritreretinao ianao!
Tsy ny fahaizana ihany fa ny fihenan'ny toetr'andro ihany koa.
Previous: COIL COATED ALUMINUM
Manaraka: Alucosun FR A2
Panamanga Composite Aluminium Alucobond
Panel amin'ny Composite Aluminium
Panels amin'ny kompana Aluminium